ဝေဒနာ ဆိုတာ နာမှူ ကျင်မှူကို ဝေဒနာ လို့ခပ်လွယ်လွယ် သိမှတ်ကြတယ်
အမှန် ကတော့ နာမှူ ကျင်မှူက ဝေဒနာ မဟုတ်ပါဘူး။
နာတယ် ကျင်တယ် ဆိုတာ ခံစားသိတာက မှ ဝေဒနာ ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာ နာတယ် လို့ 
ခံစားမိတာ ကျင်တယ် လို့ ခံစားမိတာ အဲ့ဒါ ဝေဒနာပါ။လက်နာရင် လက်မှာ ဝေဒနာ ပေါ်တယ်
ခေါင်းနာရင်ခေါင်းမှာ ဝေဒနာ ပေါ်တယ်။နာတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့စိတ်ကလေး က ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ရွင်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်းကိုခံစားမိတာလည်း ဝေဒနာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုမှ မခံစားပဲနေတာက
ဥပေက္ခာ ဝေဒနာ ဖြစ်ပါတယ်။ဝေဒနာ ရဲ့သဘောက မနှောမှာခံစားမှူပေါ်လာတာမျိုးပါ။
နာတယ် ကျင်တယ် ခံစားရတာ မှ ဝေဒနာ မဟုတ်ဘူး ခံစားမှူအားလုံး ဟာ ဝေဒနာ ပါ။
ပျော်ရွင်တဲ့ သူက ပီတိ ဆိုတဲ့ သုခ ဝေဒနာ ခံစားနေတာပါ။၀မ်းနည်းတဲ့သူက မကျေနပ်ခြင်းတွေ နဲ့
ဒုက္ခ ဝေဒနာ ကိုခံစားရပါတယ်။
ခပ်လွယ်လွယ် ကတော့ နာတာကျင်တာကို သိမှတ်ကြတာများပါတယ်။
နာတာကိုနာတယ် နာတယ် လို့ သိနေတာက သမထ ဖြစ်ပြီး နာမှူသဘောမှာ စစ် ခနဲ့ နာတယ်
ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ် စစ် ခနဲ့နာတယ် ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ် ဒါ ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်
၀ိပဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာတာ ကျင်တာ က ဆက်တိုက်နာနေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ စစ် ခနဲ့ နာပြီးရင်
ပျောက်သွားပါတယ်။တစစ်စစ် နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ဒါကို သေချာ စိုက်ကြည့်ရင် နာတယ် ဆိုတဲ့ဝေဒနာ မှာ
တောက်လျှောက်နာနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိလာပါမယ်။
နာတာလေးဖြစ်လိုက် နာတာပျောက်သွားလိုက်နဲ့ အဲ့ဒါ ကို ၀ိပဿနာ ညာဏ် နဲ့ စောင့်ကြည့်ရင်
ငြီးငွေ့ ပြီး နာတာလေးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လို ပျောက်သွားအောင် အာရုံမများပဲ
နာတာလေးတွေ ဆုံးသွားရင် တစ်မဂ် တစ်ဖိုလ် ဆိုဒ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဝေဒနာက္ခန္ဓာရဲ့ သဘောမှာ စစ်ခနဲ ဖြစ်လိုက် ပျောက်သွားလိုက် နောက်ထပ် စစ် ခနဲ့ ဖြစ်လိုက်
ပျောက်သွားလိုက် နဲ့ ဆိုတာ ပဲ ပေါ်နေတာပါ။သူ့ သဘောတရားကို သိစေချင်ပါတယ်။
9 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ခန္ဓာ ငါး ပါးမှာ (၁) ရူပက္ခန္ဓာ
(၅)၀ိညာဏက္ခန္ဓာ ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
လူတော်တော်များများ က သိနေတဲ့ ရူပက္ခန္ဓာ ဆိုတာ အသွေး အသားတွေ နဲ့ ထိလို့ ကိုင်လို့ ရတဲ့
ဒီခန္ဓာ ကိုယ် အထည်ကြီး ကို ရူပက္ခန္ဓာ လို့ မှတ်ထင်နေကြတာပါ။
တကယ်တော့ ရူပက္ခန္ဓာ ဆိုတာ ခွေးမြင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခွေး ဟောင်ခံရတဲ့ အထည် ကိုယ်ကောင်ကို ရူပက္ခန္ဓာ လို့ ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ရူပက္ခန္ဓာ ဆိုတာ ပူမှူသဘော အေးမှူသဘော လို့ ခေါ်တဲ့ တေဇော ဓါတ်ရဲ့ ဖေါက်ပြန်မှူ။
မာမှူ သဘော ပျော့မှူ သဘောလို့ ပြောင်းလဲတဲ့ ပထ၀ီ ဓါတ်ရဲ့ ဖေါက်ပြန်မှူ။
ယိုစီး တဲ့ သဘော ဆောင်တဲ့ အာပေါ ဓါတ်ရဲ့ ဖေါက်ပြန်မှူ။
လှူပ်ရှား ရုန်းကန်ခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ ၀ါယော ဓါတ် ရဲ့ ဖေါက်ပြန်မှူ။
အဲ့သလို ဓါတ်ကြီး လေးပါး တို့ဖေါက်ပြန်မှူသဘောအစု လေး ကို ရူပက္ခန္ဓာ လို့ ခေါ်ဆိုတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ သဘောလေးတွေရဲ့ ဖေါက်ပြန်မှူကို ဥာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားထင်ထင် သိမြင်ပြီး
ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက် နဲ့ မတည်မြဲခြင်းကို စောင့်ကြည့်နိုင်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းတို့ 
ဆုံးပြီး မဂ် ဖိုလ် ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သမီးတော်မဂ္ဂ သစ္စာ မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ် နှာသီး ဖျားက လေ လေး ၀င်တာ ထွက်တာကိုသိပြီး
၀င်လေမှာ ကော ထွက်လေ မှာပါ ဖြစ်ပြီးပျက်တာကို သိမှတ်ပေးနိုင်ရင် ၀ိပဿ နာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်ကို ညီးငွေ့ အောင် ကျင့်ကြံပြီး ဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင် စောင့်ကြည့်နိုင်ရင် နိဗ္ဗာန် ကို မြင်ရမှာ
ကြိုးစားပြီး အားထုတ် နိုင်ကြပါစေရှင်
7 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
♦ သာသနာ ဟူသည်♦
သာသနာ ဟူသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ။
သာသနာ ဟူသည် အဆောက်အဦး မဟုတ်ပါ။ပရိယတ် ပဋိပတ် သာသနာပြု
ဆောင်ရွက်ရာအထောက်အပံ့ သာသနိကမျှသာ ဖြစ်၏။
တိုက်တာ အဆောက် အဦးများပြားခြင်းသည် သာသနာ တိုးတက်သည်ဟု
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတော် အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှ ကိုယ်စီ နှလုံးသားဝယ်
အရှူခံတရားများက ပျက်သွားလို့မရှိတဲ့ အချိန်ကျမှ
ဒီဥာဏ်က ပေါ်ရတာကိုး။ အရှူခံ ဝေဒနာလေးက ဖြစ်ပြီး
ပျက်သွားတော့မှ ရှုတဲ့ဥာဏ်က ပေါ်ခွင့်ရတာကိုး၊
ဒီတော့ မရှိတာကိုပဲတွေ့ ရတော့မှာပေါ့။
ရှူဥာဏ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာ ကမရှိဘူး။
အဲ့ဒီ မရှိတာကိုပဲ သိအောင်လုပ်ရမှာ။
အဲ့ဒီ မရှိတာကိုပဲ သိရင်တော်ပြီ။မဂ် ဖိုလ် ရက်တိုတိုနဲ့ ရောက်ရပါလို၏ လို့ 
ဆုတောင်း မနေနဲ့ ။
မရှိတာကို သိအောင်လုပ်မှ မဂ် ရမယ်။
(မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာဝန်ချ နှစ် ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
Labels: မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရား နောက်ဆုံးမိန့် ကြားရွှေသြ၀ါဒတော်များ
အလှုစာရင်းရှင်းတမ်းနဲ့ပဏာမအလှုအတွက် အစီစဉ် ပြီးစီးအောင်မြင်ကြောင်းl
အလှု စာရင်းရှင်းတမ်းနဲ့ အလှုရှင်စာရင်းလေးကို ဒီနေ့ အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်
ယခုပြုလုပ်တဲ့အလှုအတွက် ပါဝင်စုပေါင်းထောက်ပံ့ကြသော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ
အလှုရှင်များအားလုံးကို မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) မှ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိရပါကြောင်း
ပြောကြားပါတယ် ။စိတ်ကူးလိုက်တဲ့ အစီစဉ်လေး ပြီးစီးအောင်မြင်သွားလို့ ရင်ထဲမှာ
အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ပဏာမအစီစဉ် ၀က်ဆိုဒ်ဆယ်ခုအတွက်
ဒိုမိန်းလှုတာ အောင်မြင်သွားပါပြီ ။ ဒုတိယပိုင်း အစီစဉ်နဲ့နောက်ထပ် လှုမယ်ဆိုဒ်
၆ခုလောက် ရှိနေပါသေးတယ် ။ ဒိုမိန်းချိတ်ဖို့ အတွက် အတိအကျမစီစဉ်ရသေးတာ
မဆက်သွယ်ရသေးတာကြောင့် ယခုဖော်ပြလို့အဆင်မပြေသေးတာပါ ။ အလှုရှင်
စာရင်းရှင်းတမ်း နဲ့ရရှိတဲ့အလှုငွေပမာဏအတိအကျကို ဒုတိယမြောက် အလှုမှာ
ဖော်ပြပါမည် လှုမည်ဟု အသိပေးထားသော ၀က်ဆိုဒ် ၆ခုလောက် ကျန်သေးတယ်
ဒုတိယမြောက် အလှုပြီးလို့ ပိုသောငွေများကို ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း
(သို့ မဟုတ်)မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာ တစ်ခုခုကို အန်တီတင့်နဲ့ဆက်သွယ် လှုဒါန်းဖို့ 
စဉ်းစားထားပါတယ် ။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှုဒါန်းလိုသော အဆက်အသွယ်များ
အလှုဌာနများ သိရှိပါက ဆက်သွယ် အကြံပေးနိုင်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်အနှံ့ အပြား
လှုရမယ့်နေရာတွေ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့်
တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ အကုန်မလှုနိုင်သေးပေမယ့် လက်လှမ်းမီသလောက်
တတ်နိုင်သလောက် ဆက်သွယ်လှုဒါန်းဖြစ်အုံးမှာပါ နောက်ထပ် လှုမယ့် ၀က်ဆိုဒ်
၆ခုပြီးလျှင် ခန့် မှန်းပိုငွေ သုံးသိန်းနီးပါး ကျန်ရှိနေအုံးမှာပါ ဒီစာလေးကို ဖတ်မိလို့ 
ဆက်သွယ် လှုဒါန်းပါဝင်ချင်သေးရင် ပုံမှာပါတဲ့ လိပ်စာတွေအတိုင်း ဆက်သွယ်
လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှန် လှုဒါန်းလိုသူများလည်း အန်တီတင့် (ရန်ကုန်)
မသဇင်ဝင်း (တာချီလိတ်) နဲ့မြန်မာနိုင်ငံ အလှုရှင်စာရင်းမှာပါတဲ့မည်သူ့ကိုမဆို
ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။ အသေးစိတ်သိလိုပါက မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ထံသို မေးပို့ 
အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ် ။ ပဏာမ အစီစဉ်အတိုင်း
ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပီမို့အလှုရှင်များအားလုံး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဘုရားရှိခိုးပြီး
ယနေယခု ပြုလုပ်ရတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို စိတ်တွင် ရည်မှန်းအောက်မေ့၍
၁၂ - ၁၂ -၂၀၁၂ အထိ လက်ရှိစာရင်း
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ဘလော့ခရီးသည် = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုကျော်မင်းထွန်း = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုကျော်မင်းဦး = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုညီလင်းနိုင် = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုစိုးဝင်းသန်း = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုဇော်ထက် = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုထွန်းဝင်ဦး = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
ကိုအောင်ဘိုဘို = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုနေလင်းအောင် = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုနေဇော်လင်း = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုသော်တာလွင် = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုဟန်စိုး = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုမင်းညို = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုမိုးထွန်း = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုဂျွန်လေး = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုကိုလေး = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ဖိုးခွားလေး = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ခိုင်သူဇော် = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ပုသိမ်သား = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ညီညီ = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
မင်းမင်း = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ကိုမောင်ကျော် = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
ရန်နောင်စိုး = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
သိုက်ကြီး(ပုပ္ပါး) = မလေးရှားငွေ ( ၅၀ )
မြင့်မြတ်အောင် = မလေးရှားငွေ ( ၁၅ )
မသဇင်ဝင်း = မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၅ သောင်း
အန်တီတင့် = မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၃ သောင်း
မမျိုးစံပယ် = မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၃ သောင်း
မရွှေဂဲ = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
မဖြူမေ၀င်း = မလေးရှားငွေ ( ၁၀၀ )
မစင်သီယာကျော် = မလေးရှားငွေ ( ၆၀ )
မမြတ်နိုး = မြန်မာကျပ်ငွေ ၂ သောင်း ၈ ထောင်
အလှုအကြောင်း အပြည့်အစုံ သိချင်ရင် အောက်လင့်ကို နှိပ်ဖတ်ပါ
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၈) ကတော့ နောက်ဆုံး အသွယ် ပါ။
အတိတ် အကြောင်းခြင်းရာ ငါးပါး(၁-အကွက်) ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး ခြင်းရာငါးပါး(၂-အကွက်)
ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းခြင်းရာငါးပါး(၃-ကွက်) အနာဂတ် အကျိုးခြင်းရာငါးပါး(၄-အကွက်)
အတိတ်ကြောင်းခြင်းရာ ငါးပါး ဆိုတာ အ၀ိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရ၊ တဏှာ၊ဥပါဒါန်၊ဘ၀
ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးခြင်းရာ ငါးပါး ဆိုတာ ၀ိညာဏ်၊နာမ်ရုပ်၊သဠာယတန၊ဖဿ၊ဝေဒနာ
ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းခြင်းရာ ငါးပါး ဆိုတာ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ဘ၀၊ အ၀ိဇ္ဇာ၊ သင်္ခါရ
အနာဂတ် အကျိုးခြင်းရာ ငါးပါး ဆိုတာ ၀ိညာဏ်၊နာမ်ရုပ်၊သဠာယတန၊ဖဿ၊ဝေဒနာ
အတိတ် ကြောင်းခြင်းရာကနေ စပြီးကြည့်လိုက်ရင် သစ္စာ မသိ ကြလို့ပြုလုပ်ကြတယ်
ဘာနဲ့ လုပ်သလဲ လိုချင်တပ်မက်မှူတဏှာ နဲ့လုပ်တယ် စွဲစွဲလမ်းလမ်း လုပ်တယ်
အဲ့လို လုပ်လို့အကျိုးခံစားရတယ် လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးပါ။
လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် မှာ အကျိုးခံစား ရတာ က ၀ိညာဏ် လို့ ခေါ်တဲ့ အသိစိတ်
နောက် (နာမ် နဲ့ ရုပ်) ပြီးတော့ (သဠာယတန လို့ ခေါ်တဲ့ မျက်စိ နား နှာခေါင်း လျှာ ကိုယ် စိတ်)
(ဖဿ အတွေ့ အထိ) ( ဝေဒနာ ဆိုတာ ခံစားမှူ) အဲ့တာတွေကိုရလာတယ်။
လက်ရှိဘ၀မှာ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ တဏှာ စိတ် နဲ့ စွဲစွဲလမ်းလမ်း လုပ်မယ် ဆိုရင်
သစ္စာ မသိ တဲ့ စိတ် နဲ့ ပြုလုပ်ကြမယ် ဆိုရင် အနာဂတ် မှာ အကျိုးဖြစ်လာ မယ်
ဘယ်လို အကျိုးတွေ ဖြစ်လာမလဲ---- ၀ိညာဏ် လို့ ခေါ်တဲ့ အသိစိတ်
(ဖဿ အတွေ့ အထိ) ( ဝေဒနာ ဆိုတာ ခံစားမှူ) အဲ့တာတွေကိုပြန်ရပါမယ်။
ဒါတွေ ပဲပြန်ရမယ် ဆိုတာ ကိုမသိလို့ပြုလုပ်ကြ အားထုတ် ကြတာကို ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်
နဲ့ ရဟန္တာ များက သိအောင်မြင်အောင် ဟောပြ ညွှန်ပြထားတာ ကိုလေ့ လာသိထားပြီး
ဒုက္ခတွေ ပဲ အဖန်တလဲလဲ ရနေပါလားဆိုတာ သိမှ သံသရာက နေ ထွက်ဖို့ စိတ်ကူးမိမယ်
ထွက်တဲ့လမ်းကိုရှာကြမယ် ဒါ ဆိုရင်တော့ ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်ကို ဘာလို့ သင်ယူ ရသလဲ ဆိုတာလေးကို
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ် ကို သိထား နားလည်ထားရင် တရားအခြေခံ ရှိထားပြီးဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာ တရား
တွေ ကို နာကြားပြီး ၀ိပဿနာ အားထုတ် ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပါပြီ။
သံဝေဂ မရှိရင် သုတ္တာန် တရားတွေ နာကြားပြီးမှ ၀ိပဿနာ အားထုတ် ဖို့အဆင်ပြေမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ သံဝေဂ ဆိုတာ ခန္ဓာ ရဲ့ လည်ပတ် မှူဒုက္ခ ကို သိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးပေးကိုမသိရင် ကိုယ့်ကို ကိုယ် အဟုတ်ကြီးထင်နေမယ်
လက်ရှိ ဘ၀ မှာ အကုသိုလ် မလုပ် တာနဲ့ နောက်ဘ၀ သုဂတိ ဘုံကိုရောက်မယ်လို့ 
တထစ်ချ တွက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့.........
ကုသိုလ် ပြုရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် အကုသိုလ် ပြုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဇော(၇)ကြိမ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာလေးကြောင့်ပါ။
Labels: ဘာသာရေး အသိပညာဗဟုသုတ
ထောင်နိုင်တဲ့ နား ရှိရင် တိဟိတ် ပါပဲ
တချို့ကျတော့ ပါရမီတောင် မက တော့ဘူး။ ငါဟာ ပဒပရမ ပုဂ္ဂိုလ် ထင်ရဲ့ ဆိုပြီး
နောက်ဆုတ်သွားတတ်ကြတယ်။ စိတ် ကိုလျှော့ချပစ်တတ်ကြတယ်။ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ။
သစ္စာတရား ကို ထောင်နိုင်တဲ့ နားရှိလို့ ရှိရင် တိဟိတ် ပါပဲ တဲ့။ သစ္စာ တရားကိုဟော တဲ့အတိုင်း
သေသေချာချာ သဘောကျပြီး သိနိုင်ရင် တိဟိတ် ပါပဲ တဲ့ ။ တိဟိတ် ဆိုရင် ဒီ ဘ၀ တရား ရရမှာပဲ ဗျ။
3 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျေးဇူးတင် ♦ ဆုတောင်း
လေးစားစွာဂါရ၀ပြုတယ် ဆိုတာ သာမာန်အားဖြင့်တော့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုလိြု့မင်စရာရှိပါတယ်
ခုကိစ္စမှာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘာသာ ပြန့် ပွားရေးကို ရှေ့ ရှူလို့Domain လှူကြသူများကို
မြတ်နိုးစွာ လေးစားတာပါ။ ရင်ထဲ အသဲ ထဲ က လာတဲ့ စကားလို့သမီးတော် ပြောချင်ပါတယ်။
8 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပုဂ္ဂိုလ်(၄) မျိုး ထဲမှ ရွေးချယ် ကိုးကွယ်ဖို့ 
"ရေအိုင်ပမာ ပုဂ္ဂိုလ် (၄) မျိုး"
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၇)ကတော့ ကာလ သုံးဖြာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်လေပြီးသော အတိတ် ကာလ(၁-ကွက်)။ယခုဖြစ်ဆဲ ပစ္စုပ္ပန် ကာလ(၂-ကွက်နှင့် ၃- ကွက်)
နောင် ဖြစ်လတ္တံ အနာဂတ် ကာလ(၄-ကွက်)
ဒီကာလလေး သုံးဖြာ ကို ပိုင်းခြားထင်ထင် သိမြင်ခြင်းအားဖြင့် သတိ သံဝေဂ ရပြီး
သစ္စာတရားကို လေ့လာအားထုတ်ဖို့တွန်းအားပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိမှား အမှတ်မှား အကျင့် မမှားကြစေချင်ပါ
သူများပါးစပ်မှာ လမ်းဆုံးနေတတ်ကြသူများ သတိထားဆင်ခြင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဂါယာကို သုံးခေါက်ရောက်လျှင် ငရဲက လွတ်တယ် ဟူသော စကားဘယ်သူက ပြောလိုက်မှန်းမသိ ။
တကယ်ပဲ ငရဲက လွတ်ပါသလား သေချာစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၆)ကတော့ ၀ဋ်သုံးဝ ဖြစ်ပါတယ်
၀ဋ်သုံးဝ ဆိုတာ ကိလေသ ၀ဋ်။ ကမ္မ၀ဋ်။ ၀ိပါက ၀ဋ်။ စတဲ့ သုံးပါးသော ၀ဋ် ကို ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်
(ကိလေသ ၀ဋ် ဆိုတာ အ၀ိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒါန်။ ကမ္မ ၀ဋ် ဆိုတာ သင်္ခါရနှင့် ကမ္မ ဘ၀
၀ိပါက ၀ဋ် ဆိုတာ ၀ိညာဏ် ၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ဖဿ၊ဝေဒနာ၊ဇာတိ၊ဥပ ပတ္တိဘ၀၊ ဇရာ မရဏ)
ကိလေသ ၀ဋ် ဆိုတာ စိတ် မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အညစ်အကြေး ဆန္ဒကို ဆိုလိုတာပါ
ကမ္မ ၀ဋ် ကတော့ ပြုလုပ်အားထုတ်တာဖြစ်ပြီး
၀ိပါက ၀ဋ် ကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေရတာပါ ခံစားနေရတာကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်
2 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
သာသနာ့ ဂုဏ်ရည် ရှေ့သို့ချီ
မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ရှိနေဖို့ အတွက် ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ်အရင်ဆုံးစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
Labels: မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၅) ကတော့ သုံးပါးအစပ် ဖြစ်ပါတယ်
စက်ဝိုင်းမှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ၁ နဲ့ ၂ နဲ့ကို စပ်ထားတဲ့ မြှားအနီးလေး ပြထားတာရှိပါတယ်
အဲ့ဒီ မြှားအနီလေး က ၁ နဲ့ ၂ နဲ့ စပ်တာ ၂ နဲ့ ၃ နဲ့ စပ်တာ ၃ နဲ့ ၄ နဲ့စပ်တာကိုပြထားတာ
သင်္ခါရ နှင့်ဝိညာဏ် တစ်စပ်။ဝေဒနာ နှင့်တဏှာ တစ်စပ်။ ကမ္မဘ၀ နှင့်ဇာတိ တစ်စပ်။
ပဋိစ္စ သမုပ္ပဒ် (၄)
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၄) ကတော့ အင်္ဂါတစ်ဆယ့်နှစ်ပါး ပါ
အင်္ဂါတစ်ဆယ့် နှစ်ပါး မှာ အ၀ိဇ္ဇာ နဲ့ သင်္ခါရ က (၁) ကွက်မှာ ရှိပါတယ် အနီရောင် နဲ့ဝိုင်းပြထားပါတယ်
၀ိညာဏ်၊နာမ်ရုပ်။သဠာယတန၊ဖဿ၊ဝေဒနာ စတဲ့ အင်္ဂါတွေကတော့ (၂)ကွက်မှာရှိနေပါတယ်
တဏှာ၊ဥပါဒါန်၊ကမ္မဘ၀ ဆိုတဲ့ အင်္ဂါတွေကတော့(၃)ကွက်မှာအနီရောင်နဲ့ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ကတော့ (၄)ကွက်မှာရှိပါတယ်။
12 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
တစ်ခါတုန်းက မြတ်စွာဘုရားရှင် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့အချိန် ညတစ်ည သန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ ရူပဗြဟ္မာတစ်ဦးက မြတ်စွာဘုရားဆီကို လာပြီး မေးခွန်းမေးပါတယ်။
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၃) ကတော့ အလွှာတွေပါ
အတိတ် အကြောင်း တစ်လွှာ၊ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးတစ်လွှာ၊ ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းတစ်လွှာ
အနာဂတ် အကျိုးတစ်လွှာ ဆိုပြီး လေးလွှာရှိပါတယ်။
ကြောင့်မလေ့လာဖြစ်ပဲ အလှမ်းဝေးနေကြတာကို သတိထားမိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလေ ဆိုပြီး ဖာသိဖာသာနေတာလဲ ပါမှာပါ၊ သို့သော်လည်း တိုင်းတပါးကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာသာမျိုးစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ နောက်ဆုံး ဘာသာမဲ့ ၀ါဒသမားကအစ တွေ့မြင်နေကြရတာကြောင့် မသိမဖြစ်အနေနဲ့ လိ
16 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
လူနဲ့တိရစ္ဆာန် ဘာကွာသလဲဆိုတော့ လူဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိနိုင်တယ်။ သိနေတာကိုလည်း သိနိုင်တယ်။ တိရစ္ဆာန်ဟာ သူ့စိတ်ကိုသူမသိဘူး။ မသိတဲ့အတွက်ကြောင့် သိနေတယ်ဆိုတာလည်း သိဖို့ရာ သူ့မှာအလားအလာ အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိတယ်ဆိုတာ တခြားဘယ်သတ္တဝါမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ လူ့လောကမှာ လူသာလျှင် ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်။ ဒါဟာလူရဲ့ အထူးခြားဆုံး ဂုဏ်ထူးဝိသေသပဲ။ အထူးခြားဆုံးအလုပ်ပဲ။ ဒီအလုပ်ကို မလုပ်ပဲနဲ့ ချန်ထားရင် လူကောင်းကောင်း မပီသသေးဘူး။ တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့ လူတစ်ယောက် မဖြစ်သေးဘူး။
(ဖေ့ဘုတ်ကနေ ကူးလာတာ မျှဝေချင်လို့https://www.facebook.com/photo.php?fbid=342103982539343&set=a.296389060444169.70079.296362797113462&type=1&theater)
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်(၂) ကတော့ ဒုက္ခ သစ္စာ နဲ့သမုဒယ သစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့
ဒုက္ခ သစ္စာ ဆိုတာ ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုဆိုတာပါ
သမုဒယ သစ္စာ ဆိုတာ ဆင်းရဲဖြစ်စေကြောင်း အမှန်တရားကိုဆိုတာပါ
သတ္တ၀ါတွေဟာ ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှန်းမသိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ ပဲမြင်လို့
လိုချင်ရချင်ပါတယ် လိုချင်ရချင်တဲ့ တဏှာစိတ်ကြောင့် ဆုတွေတောင်းကြပါတယ်
ဆုတွေတောင်းတာက သမုဒယ သစ္စာပါ သမုဒယ သစ္စာကို ကိုယ်က လုပ်တော့
" ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ခြင်းအကြောင်းရင်း "
အခါကျမှ သာလျှင် ရွှေစစ်ငွေစစ်ကွယ်ပျောက်သကဲ့သို့
ထို့အတူလောက၌ တရားတု၊ တရားယောင်၊ တရားလက်သစ်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ် စက်ဝိုင်းလည်ပုံလေးကို ပုံမှာဖေါ်ပြထားသလို တစ်သွယ်ခြင်း
ဆီ ရှင်းပါတယ် တစ်သွယ်ခြင်းဆီ လို့ ဆိုထားတော့ သူက ရှစ်သွယ်ရှိတာပါ
ပထမဆုံးအနေနဲ့လင်္ကာလေးကို တင်ပေးပါ့မယ်
မူလနှစ်ဖြာ။သစ္စာနှစ်ခု။ လေးခုအလွှာ။အင်္ဂါတစ်ဆယ်နှစ်ပါး။တရားကိုယ်များနှင့်။သုံးပါးအစပ်။
ကောင်းသူကို ကယ်တင်မည်၊ မကောင်းသူကို ဖယ်ရှားပါတော့မည်။
မကြာမီ "သိကြားသာသနာ" ရောက်လုနီးပါပြီ။
ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲက သီချင်းအပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်ကို ခေတ်ပောာင်းအဆိုတော်က ဆိုခဲ့သည်။
ယခုခေတ်တွင်လည်း ခေတ်သစ်အဆိုတော်တို့ ပြန်ဆိုထားသည်။
စင်စစ်မူ သုတ် ၀ိနည်း အဘိဓမ္မာဟူသော ပိဋကတ်သုံးပုံစလုံးတွင် ဘုရားရှင်က
သိကြားမင်းအား သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်ရန်
မှာခဲ့သည် ဟူသော အချက်မှာ လုံးဝမပါပါ။ မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က
ဒေ၀ဒတ်က ဘုရားရှင်အား "အရှင်ဘုရား သက်တော်ကြီရင့်ပါပြီ၊
သံဃာကို တပည့်တော် အုပ်ချုပ်၍ ဆုံးမပါမည်" ဟု လျှောက်တင်ထားပါသည်။
ငါ မရှိ ရှာ၍ လည်းတွေ့မည်မဟုတ်ပေ
ပြီးခဲ့သော ကဗျာတွင် မိမိ သည် မိမိ ကိုမိမိ် ပြန်ရှာကြည့်ခဲ့သည်။
ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်တတ်သော အကျင့်မျိုးဖြင့် အမြဲတမ်းလိုလို စနောက်ပျော်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့သူ
ဖြစ်သောကြောင့် ယခုလိုချစ်သူ ၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသောအခါ မပျော်နိုင် မရွှင် နိုင်ဖြစ်ပြီး
စိတ်သောက ခံစားနေရခြင်းကြောင့် ယခင် က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ခဲ့သော
မိမိ ကို မိမိ ပြန်ရှာဖွေခြင်း သဘောဖြင့် ရေသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်မှာ မိမိ သည် မရှိသော တရားသာဖြစ်သည်။ ပညတ် သဘောအရ သာရှိပြီး
ပရမတ်သဘောအရ မရှိသောသူဖြစ်သည်။ မရှိသောသူကိုရှာဖွေခြင်းသည် ရူးသွပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဤသည်ကို မိမိ် မသိသည် မဟုတ်ပါ။သိသည်သာဖြစ်သည်။ သို့ သော်....
6 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မုန်းမာန်ဖွဲ့ ကာ ညှိုး ရက်သူကြောင့်
ဟောဒီမြို့တမြို့ လုံးမှာတော့ ကျမ က အလှဆုံး ရှင့်..
အစစ အရာရာ ကျမ လိုချင်တာဘာမဆိုရတယ်…။
မျက်နှာတချက်မညှိုးစေရဘူး..။အဲ့တော့ ကျမ က ဘာမဆို
လိုတရ ဖြစ်နေတာပေါ့..။ ဟော….ခုလည်းကြည့်…
ရာဇ၀တ်သင့်လာတဲ့ သတ္တုက ဆိုတဲ့လူကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတာ
13 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ငါ ရင်ဆိုင်တွေ့ လိုက်သောသေခြင်းတရား
အချိန် က နောက်ကျနေပြီ
ဖုထစ် ချိုင့်ခွက်လို့ 
လမ်းက လည်း တောင်တက်လမ်း
အကွေ့ အကောက်တွေ နဲ့
စည်းစိမ် ချမ်းသာပြည့်စုံရခြင်း နှင့် အခြံအရံ ပေါများရခြင်း
(က) ၁-ယောက်သောသူသည် မိမိ ကိုယ်တိုင် ပေးလှူ၏။သူတစ်ပါးကို
မတိုက်တွန်း။ထိုသူသည် ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်သောဘ၀`၌ စည်းစိမ်ချမ်းသာ
နှင့်သာ ပြည့်စုံရ၍ အခြံအရံနှင့်မပြည့်စုံ။
တစ်ဦးတည်းသောသားကို မိန်းမပေးစားပြီးကာမှမိန်းမမြုံ ဖြစ်နေလို့
တခြားမိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့ ပေးစားပြန်သတဲ့..။
အဲ့ဒီတော့ မယားကြီးနေရာကနေတဲ့သူကမယားငယ်သာ ကလေးမွေး
နိုင်ခဲ့ရင်တော့ သူပဲမျက်နှာသာရလို့ စည်းစိမ်တွေ ပိုင်ဆိုင်တော့မှာပဲဆိုပြီး
မနာလိုစိတ် နဲ့ မယားငယ်ကိုကြံစည်တယ်..။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်သူ့ ကို
အကြောင်းကြားဖို့ ပေါ့..။မယားငယ်ကလည်း ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတယ်ထင်လို့
တကယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့ ပြောပြတာပေါ့လေ..။ အဲ့ဒီမှာ
မယားကြီးလုပ်သူ က ဂရုစိုက်သလိုလိုနဲ့ ယာဂုလို့ခေါ်တဲ့ အဟာရ ကို
ပွင့်သစ်စ ပန်းလေးတစ်ပွင့်လောက ကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသေး။
သို့ သော် မိဘများက သာကေတ မြို့ မှသူဌေးသားတစ်ဦးနှင့်ပေးစားဖို့ပြောလာတော့
အံသြတုန်လှူပ် လက်မခံနိုင်စွာ ခေါင်းခါမိသည်။တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး ..ဒါသီ
အိမ်မှူကိစ္စ ဗာဟီရ `၌ ကျွမ်းကျင်လိမ်မာသူလေး။မိဘများက ဖူးဖူးမှူတ် သဲသဲလှူပ်
ချစ်မဆုံး။ အနန္တော အနန္တငါးပါးကိုလည်း ဦးထိပ်ထားကာ သဒ္ဒါရိုကျိုးမြတ်နိုးကြည်
ညိုသူ။အလှူရေစက် လက်နှင့်မကွာသူ။သီလ အရာမှာ နိစ္စဓူဝ ပဉ္စင်္ဂ သီလကိုခါးဝတ်
သည်း မိန်းမတော်-မိန်းမကောင်းလေး ဣသိဒါသီ …တဲ့။ဒီနာမည်လေးကို မသိသူမရှိ။
ကာလ သားတို့ တမ်းတမ်းစွဲ စုံမက်နှစ်သက်ကြ၏။မြတ်နိုးတန်ဖိုးထား၏။အိမ်နားတ၀ိုက်
ဣသိဒါသီ ကိုမြင်ရနိုးနိုး လျှောက်ပြန်သံပေး အဝေးမှချောင်းမြောင်းကြည့်ကြ၏။
သို့ ရာတွင် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိဣသိဒါသီလေး၏ အရိပ်အရောင်သော်မှ မမြင်ရ။
လောက၏ သဘာဝ မရနိုင်လေ လိုချင်လေ ဖြစ်၏။
``အဖေ ကလဲတွေ့ ရာလူနဲ့ပေးစားပါ့မလား..အဖေတို့ထက်နှစ်ဆ ချမ်းသာတယ်။
ယောင်္ကျားလေးကလဲ အဖက်ဖက် ကတော်ရှာတယ်။သောက်စားမူးယစ်မရှိဘူး။
သမီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သတို့သားလောင်းလေးပါကွယ်``
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ကတည်းက
မဂ္ဂသစ္စာကို ရှာဖွေခဲ့သည်မှာ ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောရမည်ဆိုလျှင်
သူတစ်ဦးအနေဖြင့် အလုပ်မများသော တာဝန်များကြောင့်
အားနေတတ်သောအခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်တတ်ကြသည်။
မိမိ သည်လည်းတကိုယ်တော် နေထိုင်သူဖြစ်သဖြင့်
ရှိနေခြင်းသည်ပင် တော်တော် ကိုအဖိုးထိုက်တန်သူ ဟု
မိမိကိုယ်မိမိ ကင်ပွန်းတပ် အမွှန်းတင် လိုက်မိသည်။:D
ဘုရားကို အမှန်တကယ် ပူဇော်နိုင်ကြပါစေ
သဏ္ဍန်တော် ဘုရားနဲ့ဥာဏ်တော် ဘုရား ပါ..
အားလုံးမြင်နေ ၊ တွေ့ နေ ပူဇော် နေကြတဲ့ .ဘုရား က သဏ္ဍန်တော် ဘုရား ဖြစ်ပါတယ်..
စေတီတော် ၊ ရုပ်တုတော် ၊ ပုံတော် စသဖြင့် ပေါ့ ... လူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း
ဝေဿန္တရာ ဇာတ်တော်ကို ဖတ်မှတ်ဖူးသူတိုင်းသိပြီး
ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ဝေဿန္တရာမင်းကြီးသည် သားတော်
တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှ နတ်တို့ သနင်းသိကြာမင်းကြီးသည်
မင်းကြီးဝေဿန္တရာကို ပြုစုသူမဲ့မည်စိုးသောကြောင့်
Posted on: Sunday, June 24, 2012
သောတာပန် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်း လေးပါး
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတ၀န် ကျောင်းတော် `၌ သီတင်းသုံးတော် မူစဉ်
သိကြားမင်းနှင့် တကွ နတ်အပေါင်းတို့ သည် စုဝေးရောက်ရှိကြကုန်၍
သိကြားမ င်း က“ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်သောမြတ်စွာဘုရား…
ဤမည်သော ပြဿနာ လေးရပ် တို့ ၏ အနက် အဓိပ္ပါယ် ကို
ကျွန်ုပ် တို့ အား ထင်ရှားဖြေဆို ပါကုန် ’’ဟူ၍ လျှောက်ထားလေ၏။
မြတ်စွာဘုရားရှင် က မီးလွတ်စားကြဖို့မှာကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသည်။
ထို့ အတွက်ကြောင့်လားတော့မသိ မီးလွတ်စားသောကိုယ်တော်များ
တချို့ တချို့ နေရာများတွင် ရှိကြသည်။ကြည်ညိုကြသူများကလည်း
တအုံးအုံးနှင့်ပင်။လူတွေများစည်မှ စည် ။
ဘုရားဟောသည့်မီးလွတ်စားရန် အကြောင်းမှာ ဘယ်လိုမျိုး
ပါလဲ ဟူ၍ နည်းနည်းမှ လည်းမလေ့လာ။မိမိ ကတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့။
``ဖုဌဿ လောက ဓမ္မေဟိ၊စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ။``
Posted on: Sunday, June 17, 2012
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော် မြတ်ကြီး ကသတ္တ၀ါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွား
အလို့ ငှါ သစ္စာ(၂)ပါးကို ဟောကြားတော်မူပါတယ်…
အတော်များများသိကြတာက သစ္စာ(၄)ပါး ပါ..
ခုပြောမယ့်သစ္စာ(၂)ပါး ကို တော့ ဟီရိ သြတပ္ပ အလို့ ငှါ
6 comment Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
,ဂျပန် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဟာ နန်းတော်ထဲ ကိုဝင် လာတယ်...
အမှတ်တမဲ့ ဆိုတော့ အစောင့်တွေ ကသတိမထားမိလိုက်ဘူး..
အဲ့ တာနဲ့ နန်းတော်ထဲရောက်ပြီး ရှင် ဘုရင် နဲံတွေ့ တယ်..
ရှင် ဘုရင် က ဘုန်းတော်ကြီးကိုတွေ့ တော့ မေးတယ်.
``အရှင်ဘုရား..ဘာအလိုရှိပါသလဲ ဘုရား .``
ဘယ်ကလာလို့.ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲ
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားခဲသော မရဏဿတိ ကို
သဖြင့် ၃ နှစ်ကြာသောအခါ ဥာဏ်တော်ရင့် နေသည်ကို
သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားက ရာဇဂြိုလ် ပြည်
ဇေတ၀န်ကျောင်းတော် တွင် သီတင်းသုံးရာမှ
အာဠ၀ီပြည် သို့ကြွတော်မူ၍တရားပွဲကျင်းပရာ
သမီးကို ပြဿနာလေးချက်အား မေးလေ၏။
0 comment Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
‘‘‘ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာ ဘယ်သူလာလို့ ထောက်ပံ့ပါလိမ့် ’’
ဒီဘ၀ဒီခန္ဓာ ဘယ်သူထောက်ပံ့ လို့ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာလေး
ရုပ်ခန္ဓာ နဲ့နာမ် ခန္ဓာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီရုပ်နဲ့ ဒီနာမ် ကို ဘယ်သူတွေထောက်ပံ့ သလဲ ဆိုတာလေး
ရုပ် ကို ထောက်ပံတဲ့အကြောင်းအရာ(၄)ပါးရှိပြီးတော့
နာမ် ကို ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းအရာ(၂)ပါးရှိပါတယ်
ရုပ် ကိုထောက်ပံ့တဲ့အရာ(၄)ပါး က
2 comment Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အနာထပိဏ် သူဌေးကြီး ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိကြမှာ
ဖြစ်ပါတယ်…သူဌေးကြီး ဟာ ဘုရားရှင် နဲ့ တကွ ရဟန်းတော်များကို
ဆွမ်းအမှူ နဲ့ လုပ်ကျွေးပြုစု တဲ့ဒကာ တစ်ယောက်ပါ..အကြီးဆုံး
သမီးဖြစ်တဲ့မဟာသုဘဒ္ဒါ ကို အမှူကိစ္စ အ၀၀ ဆောင်ရွက် ဖို့ 
တာဝန်ပေးထားပါတယ်…မဟာသုဘဒ္ဒါ က အမှူကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရင်း
တရားတော်နာကြားလို့သောတာပန်တည်ပါတယ်..နောက်တော့
Posted on: Saturday, June 9, 2012
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုံးက
ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေမှာ မာတိက ဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာ ရှိတယ်..
အဲ့ဒီရွာမှာ မာတိကမာတာ လို့ရွာသူရွာသားတွေက လေးစားရိုသေခြင်း
၀ါဆိုခါနီးတနေ့ မှာ ရဟန်းအပါး(၆၀)ဟာ ရွာကိုရောက်
လာတယ်..မာတိကမာတာ က ရဟန်းတော်များကို ဒီရွာမှာပဲသီတင်း
သုံးနေထိုင်ဖို့လျှောက်ထားတာကြောင့် ရဟန်းများကလဲ လက်ခံတော်
မူတယ်…ရဟန်းများက လက်ခံတော်မူတာနဲ့ ..ရဟန်းတော်များနေဖို့ 
တာဝတိံတာ နတ်ပြည် က နတ်ဥယျာဉ်လေးထဲမှာ
“မာလဘာရီ”လို့ခေါ်တဲ့ နတ်သားတစ်ပါးဟာ
နတ်သမီးလေး ငါးရာ ကပန်းပင်ပေါ်တက်ပြီးပန်းပွင့်တွေ ချွေချ
သလို ကျန်တဲ့ နတ်သမီးငါးရာကတော့ ချွေချ တဲ့ ပန်းလေးတွေ
ပန်းပင်ထက်မှာ ပန်းချွေနေတဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးဟာ
အပင်ပေါ်မှာပဲ စုတေ သေလွန်လို့ နတ်ခန္ဓာပျောက်သွားတယ်..
4 comment Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက် ပြီး ဘာမှ သဲသဲကွဲကွဲ မလေ့လာမိသေးတဲ့အချိန်ကပါ
အမကြီးတယောက်က ဘယ်က ကြားလာမှန်းမသိ တဲ့လုပ်နည်းလေးတခုကိုပြောလို့
လိုက်လုပ်ခဲ့မိပါတယ်.. သူပြော တာက
3 comment Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မချစ်တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကား မပြောပါနဲ့
တတ်သိနားလည်လွန်း လို့ ပြောနေတာမဟုတ် ပေမယ့်...
သိသလောက် တတ် သလောက်လေး ကို သူငယ်ချင်း တွေ ကို
မျှ ဝေချင် မိ လို့ပါ....
မချစ်တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကား ဘယ်သူကိုမှ မချစ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားတွေ
ပြောနေတာ မကြာ မကြာ ကြားနေ ရ ပါ တယ်...
ချစ်တယ် ဆို တာကလဲ တွေ့ သမျှ မြင်သမျှ ချစ်လို့ ရေ နတာ မျိုး
♦♦♦သင် မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ တွေ့ ဖူးပြီလား♦♦♦
အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဆိုတာ ကိုယ့် ကို စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်...
ကိုယ့် ရင်ထဲမှာပူလောင်နေတာ ကိုငြိမ်းသတ်ပေးပါတယ်...
မသိသေးတဲ့ အတတ်ပညာ ကိုသိအောင်ပြပါတယ်...
သင့်ဘ၀ မှာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ ခဲ့ ပြီလားဆိုတာ
သေချာစဉ်းစားပါ...မတွေ့ သေးရင်တွေ့ အောင်ရှာပါ..
ရအောင် ကြိုးစားပါ...ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန် ကိုရဖို့ အတွက်
သင့်ကိုအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ က ကူညီပါလိမ့် မယ်..
1 comment Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အားလုံးသော ပုထုဇဉ်တို့ ၏မျက်စိများသည် ချမ်းသာခြင်းအတု ကို
မြင်ကြပါပေ၏။ အပေါ်ယံအားဖြင့် မြင်နိုင်တွေ့ နိုင်သောချမ်းသာခြင်း
ကိုမက်မော ကြပါ၏။ စိန်ရွှေရတနာ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို တပ်မက်ကြ၏။
မသိကြချေ။ ဤကဲ့သို့ မသိခြင်းသည် အ၀ိဇ္ဇာ သာဖြစ်၏။အမှောင်ဖုံးနေ
သောကြောင့် မသိခြင်းပင်၊။၎င်းချမ်းသာခြင်းတို့ ကို ချမ်းသာသည်ဟု
မြင်နေတွေ့ နေ သိနေပြီး မက်မောစွာ ရှာဖွေကြ၏။ရသည်ရှိသော်
ကုသိုလ် အမျိုးအစား ၃ မျိုးမှာ
အဲ့ဒီကုသိုလ် တွေ ကို ပြန်လည်ပြီး ခွဲခြမ်းပြထားပါတယ်။
၁။ ဒါန သည် အညံ့စားကုသိုလ်
၂။ သီလ သည် အလတ်စားကုသိုလ်
၃။ဘာဝနာသည် အမြတ်စားကုသိုလ် ဆိုပြီး ခွဲ ခြားပြပါတယ်။
နံပါတ် ၃။ ဘာဝနာမှာ နောက် ထပ် ခွဲ ခြားပြသေးတာက
သမထ နဲ့ဝိပဿနာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။။ သမထ လမ်းစဉ် က ဗြဟ္မာ ဖြစ်ကြောင်း
ကုသိုလ် ဖြစ်ပြီး ၀ိပဿနာ က နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အကျင့်လမ်းစဉ် ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိပဿနာ က မဂ္ဂသစ္စာ ပါပဲ။မှန်ကန်တဲ့ကျင့် စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဒကာမလေးတစ်ယောက် ဆွမ်း လာပို့တယ်..
“အရှင် ဘုရား အမေ က ဆွမ်းပို့ခိုင်းလိုက်လို့ ပါဘုရား”
“အေးအေး …ကိုရင်တွေ ပေးလိုက် ဆွမ်းချို င့် ကို..”
ဘုရားဝတ်ပြုပြီး တော့ ဒကာမ က
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြသူများ
မှတ်သားမိသမျှ ကို ဆွေးနွေးလိုပါသေးသည်။
အနာဂမ် မတည် သေးသမျှ အချစ်သည်ရှိနေအုံး
မည် ဖြစ်၏။ဘာသာရေး အကြောင်းလေးများ
အနာဂါမ် မတည်သေးသူသည် လောဘ ကိလေသာ
ရှိနေမည် ကို သတိပြုမှတ်သားသင့်ပါသည်။
သိသမျှ နားလည်သမျှတော့ ဘာသာရေးအကြောင်းကို
**ရီလည်း ရီ ၏်** ♫♫♫ ** ငို လည်း ငို ၏**
သုဒ္ဓေါဒန မင်း ကြီး ကိုး ကွယ်သော **ကာလဒေ၀ီလ ရသေ့ ကြီး** သည်
မင်း ကြီး နဲ့ မိဖုရား ကြီး တို့ က သား တော် လေး တစ်ပါး ဖွါး မြင် သည် ဟူသော သတင်း ကို
ကြား သိ၍့ ရွှေနန်း တော် ဆီ သို့ု လာ ပြီး သား တော် လေး ကို ကြည့် လေ၏။…
ရသေ့ကြီး သည် သိဒ္ဓ တ္တ မင်းသားလေး ကို မြင် သည်နှင့်……
``ရီ လည်း ရီ ၏်…ငို လည်း ငို ၏``…
``ဘာ ဖြစ် လို့လဲ ရသေ့ ကြီး``..ဟု .. မင်း ကြီး က မေးရာ…
``မင်း ကြီင်္း ..သင့်ရဲ့သားတော် လေး ဟာ ဧကန် စင် စစ် ..သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်ကို ရ တဲ့ 
ဘု ရား စင်စစ် ဖြစ် တော် မူ လိမ့် မယ်…ဘု ရားပွင့် တာ နဲ့သတ္တ၀ါ တွေ ကျွတ် တမ်း ၀င် လိမ့် မယ်.
.မင်း ကြီး…ကျွတ်တမ်း ၀င် ကြမယ့် သတ္တ၀ါ တွေ အတွက် ၀မ်းသာလွန်းလို့ 
အလှုစာရင်းရှင်းတမ်းနဲ့ပဏာမအလှုအတွက် အစီစဉ် ပြီးစီး...
ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးပေးကိုမသိရင် ကိုယ့်ကို ကို...
စည်းစိမ် ချမ်းသာပြည့်စုံရခြင်း နှင့် အခြံအရံ ပေါမ...